ပန်ဒိုရာ: အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ - ၂
အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ - ၂
မြန်မာပြည်မှာ မူပိုင်ခွင့်လို့ခေါ်ကြတဲ့ ကော်ပီရိုက်အကြောင်း မပြောခင်မှာ အိုင်ပီ (ဒီနေရာကစပြီး Intellectual Property ကိုအိုင်ပီလို့ပဲသုံးပါမယ်။) အမျိုးအစားတွေအကြောင်း အကြမ်းဖျင်းပြောပြချင်ပါတယ်။
၁) Copyrights (ဥပမာ။ သီချင်း၊ စာအုပ်)
၂) Patents (ဥပမာ။ ကော်ဖီဖျော်စက်လို တီထွင်မှုများ inventions)
၃) Industrial Designs (ဥပမာ။ အအေးပုလင်းဒီဇိုင်းပုံစံလိုတီထွင်တာမျိုး)
၄) Trademarks (ကုန်ပစ္စည်း ၀န်ဆောင်မှုပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ် )
၅) Geographical Indications (ဥပမာ။ ရှန်ပိန်)
၆) Trade Secrets & Confidential Information (ဥပမာ။ ကိုကာကိုလာရဲ့ဖော်မြူလာ)
၇) Plants Varieties Protection
စာပေအနုပညာနဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာ လက်ရာများ literary, artistic and scientific works တွေ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးတွေကို ကို ကော်ပီရိုက် ဥပဒေက ကာကွယ်မှုပေးပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်မှု အသံလွှင့်မှု ဖျော်ဖြေမှု performances, broadcasts (ဥပမာ။ စတိတ်ရှိုးလို့ ခေါ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေ) ကတော့ ကော်ပီရိုက်နှင့် သက်ဆိုင်သောအခွင့်အရေး (Copyright's Related Rights) ထဲမှာပါပါတယ်။
Copyrights ဟာဖန်တီးသူရဲ့ အိုင်ဒီယာကိုတော့ကာကွယ်မပေးပါဘူး။ သူ့ရဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ပစ္စည်း presentation ကိုသာကာကွယ်ပေးတာပါ။ ဥပမာ ရှိတ်စပီးယား က ရိုမီယိုနဲ့ဂျုးလိယက် ချစ်ကြ၊ အမျိုးချင်းချင်းမတဲ့ ၊ သတ်သေကြ ၊ ကွဲကြ ဆိုတဲ့သဘောတရားဇာတ်လမ်းနဲ့ရေးထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းသဘောကို နောက်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ကယူပြီး ၀တ္ထု အသစ်ရေးလို့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကော်ပီရိုက်မှာ သက်တမ်းရှိပါတယ်။
ကော်ပီရိုက်ကိုဘာလို့ လိုက်နာရတာလဲ။ သဘောတရားအားဖြင့်ကတော့ ဖန်တီးတာတွေအားပေးဖို့။ ပြီးတော့ တရားမျှတဖို့။ (ဒီနေရာမှာ ဖန်တီးသူတွေ ရောင်းချသူတွေဘက်ကသာမက သုံးစွဲသူတွေဘက်ကပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာ မငြင်းပါဘူး။ )
နောက်တစ်ချက်က စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပူးပေါင်းကူညီမှုတွေအတွက် နိုင်ငံတွေအချင်းချင်းကြားမှာ လက်မှတ်ထိုးထားရတဲ့ စာချုပ်တွေ၊ အဖွဲ့ဝင်ထားရတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် စာချုပ်ပါအချက်တွေ အဖွဲ့ဝင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေ အချက်အလက်တွေကို လိုက်နာရတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ့ဥပဒေကိုလည်း အဲဒါနဲ့အညီ ပြုပြင်ရတယ်။
ကော်ပီရိုက်ဥပဒေဟာအင်မတန်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာဆိုရင်တော့ ကုမ္ပဏီဥပဒေပြီးရင် အထူဆုံး စာမျက်နှာအများဆုံးဟာ ကော်ပီရိုက်ဥပဒေပါ။ အခုအထိလည်း ပြင်နေတုန်းပါပဲ။
ကော်ပီရိုက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတာကတော့ Berne Convention (၁၈၈၆) ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ အဲဒီမှာ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့အစည်းဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံစီးပွားရေး တိုးတက်လာရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဲဒီလိုစာချုပ်တွေမှာ ပါဝင်လာပြီး အိုင်ပီရိုက်ကာကွယ်မှုတွေကို အဆင့်တစ်ခုရောက်အောင် မလွဲမသွေ သတ်မှတ်လိုက်နာရမှာပါ။
ပထမဆုံးသိသင့်တာကတော့ ကော်ပီရိုက်ပိုင်ရှင်ဟာ သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုကို သူကြိုက်သလိုသုံးစွဲခွင့် exclusive ရထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကော်ပီရိုက်ဆိုတာ တချို့ရိုက်တွေလို မှတ်ပုံတင်စရာမလိုပါ။ သူဖန်တီးပြီးတဲ့အချိန်မှာ သူဟာပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ economic rights အောက်မှာ သူဟာထုတ်လုပ်ရောင်းချ နိုင်ခွင့်ရှိပြီး moral rights အနေနဲ့သူ့နာမည်နဲ့သူ့ဖန်တီးမှုကြားကသက်ဆိုင်မှုကိုသူဟာပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။
ထပ်ပြီးအသေးစိတ်ပြောရရင် rights of reproduction ကိုလည်းသူပိုင်ပါတယ်။ သူပိုင်တဲ့လက်ရာကို တင်ပြချင်တဲ့မီဒီယာမျိုးစုံနဲ့သူရောင်းပါမယ်။ သုံးစွဲသူအနေနဲ့ကတော့ တကိုယ်ရည်စာ သုံးစွဲဖို့ reproduce လုပ်တာထက်ပိုမိရင် သူ့ကော်ပီရိုက်ကို ထိပါးရာကျနေပါပြီ။
နောက်တစ်ခုက right of performance သူပိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအောက်မှာ right of broadcasting နဲ့ right of communication to public စတာတွေကို သူပိုင်တယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲမက လူအများကြားအောင်ကျယ်လောင်စွာ သီချင်းဖွင့်ပေးတာပါ မရသလိုဖြစ်နေပြီနော်။
ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးတွေးကြည့်ရင်တော့ ပိုင်ရှင်ကကြိုက်မယ်ထင်ရတယ်။ သူ့အခွေကို ပေါက်အောင်လုပ်ပေးတာကိုး။
ဒါဆို သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ ကော်ပီရိုက်ပိုင်ရှင်က သူ့အခွေကို တိတ်ခွေ ဒီဗီဒီ ဗီစီဒီ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခွင့် ရှိတာကိုသိလောက်ပြီ။ ဒါပေမယ့် သင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မရောင်းဘူးဆိုရင်တော့ ခိုးကူးတာတွေ ပေါ်လာမှာပဲ။ တဖက်ကလည်း သူ့စီးပွားရေးကို ထိခိုက်လောက်အောင်ဖြစ်လာတော့ တော်ပြီ သီချင်းမဆိုတော့ဘူး. ခွေမထုတ်တော့ဘူး ဆိုတော့ ကိုယ်လည်းနားမထောင်ရ အားလုံးရှုံးကြရတာပဲ။ ၀ယ်တဲ့သူက အလကားရတဲ့အထိ အသက်သာဆုံးဖြစ်ချင်မယ်။ ရောင်းတဲ့သူကလည်း သူဌေးချက်ချင်း ဖြစ်အောင်အထိ အများဆုံးရချင်တယ်။ သူ့မှာ အရင်းအနှီးတွေလည်းရှိတယ်။ အဲဒီကြားမှာ နှစ်ဖက်လုံးအဆင်ပြေအောင်ညှိကြဖို့လိုတယ်။ ရောင်းသူဘက်ကတော့ ကော်ပီရိုက်နဲ့ကာကွယ်ပေးထားတယ်။ ၀ယ်တဲ့သူဘက်ကရော။ ကိုယ်ဆို နှစ်တိုင်း ကွန်ပြူတာအတွက် နော်တွန်အန်တီဗိုင်းရပ်စ်ဆော့ဖ်ဝဲ မဖြစ်မနေ၀ယ်ရတိုင်း အရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။ ဈေးကလည်းကြီးတယ်လေ။ ဒီနေရာမှာဝယ်သူဘက်ကကာကွယ်တဲ့ Antitrust Law တို့ Consumers' right ဆိုတာတွေရှိပါတယ်။
နည်းပညာအသစ်တွေပေါ်လာတာကလည်း တော်တော်အရေးပါတယ်။ တခါတခါကျတော့ ဈေးကြီးလို့ခိုးကူးတာထက် လွယ်လွန်းလို့ခိုးကူးကြတာ။ စဥ်းစားကြည့်ပါ။ ရွှေထုပ်ကြီးကို လုံလုံခြုံခြုံသိမ်းမထားပဲ လမ်းလယ်ခေါင်ချထားပြီးမှ ခိုးတဲ့လူကိုစောင့်ဖမ်းရင် ဘယ်တရားပါ့မလဲ။ လွယ်ရင်သူကြွယ်တောင်ခိုးတယ်တဲ့။ စကားပုံတောင်ရှိသေးတယ်။ အဲဒီမှာ ဖန်တီးမှုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူနဲ့ ဖန်တီးမှုနဲ့လူတွေကို ဆက်သွယ်တဲ့နည်းပညာ ထုတ်လုပ်သူတို့ကြားက conflict of interest ကိုတွေ့နိုင်တယ်။
(အိုင်ပီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံဗဟုသုတတွေ ရချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ရှိတဲ့ အဝေးသင် သင်တန်းတွေတက်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ DL 001 နဲ့ DL 101 ကိုတက်ပါ။ ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမပေးရပါဘူး။ DL 101 အတွက်ဆိုရင် အောင်သွားရင် Certificate ရပါမယ်။
Posted by pandora at 8:48 PM
လာလည်သွားပါတယ်။ ရေးထားတာတွေ ဖတ်ရတာ ဗဟုသုတရတယ်။ ဘလော့သက်တမ်း မကြာသေးပေမဲ့.. တော်တော်အရေးသွက်မယ်လို့ ထင်မြင်မိတယ်။ နောက်ဆိုရင် အမြဲ လာဖတ်မှ။
လာဖတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဝေဖန်အကြံပြုတာတွေလည်းကြိုဆိုနေပါတယ်။
April 1, 2007 at 11:08 PM
အကိုကြီး.. သူများသချင်းတွေကို ကိုယ်BLogမှာ Download Link ပေးရင် Copyright Law နဲ့မလွတ်ဘူးလား? upload free က နေတင်ပြီး Download ပြန်ပေးတာကိုပြောတာပါ။
မလွတ်စရာ အကြောင်းတွေရှိပါတယ်။ အသေးစိတ် နောက်ပို့စ်တစ်ခုမှာ ဆက်ပြောမယ်နော်။
April 24, 2007 at 1:46 PM
H.E.R.’s I Can’t Breathe (ပါဠိversion) - I Can’t BreatheH.E.R.ပါဠိဘာသာပွနျ – နတ်ထိ Songwriters: Dernst Emile Ii / Tiara Nicole Thomas / Gabriella WilsonI Can’t Breathe lyrics © Tiara Thomas Music,...
ခဈြခွငျးတရားနှငျ့ နှောငျကွိုးမြားနှငျ့ ခှဲခှာရခွငျးမြာ$း - တှေးနမေိတယျ... စမှတျရှိရငျ ဆုံးမှတျရှိသလို အသဈတဖနျပွနျအစတှလေညျး ရှိနတေယျဟုတျလား...။ ဒီနေ့ ၂၉ဟာ ကိုရမှေနျဆုံးပါးသှားတာ တပတျတိတိပွညျ့တဲ့နပေ့ေါ့။ သူ ရှိနစေ...
လှေကားအောက်ကအခန်းကလေး - စိတျက ကငျမရာနောကျလိုကျတယျကငျမရာက ကွှပျကွှပျအိတျနောကျလိုကျတယျကွှပျကွှပျအိတျက လနေောကျလိုကျတယျတယောကျပငျ့သကျက တယောကျအသကျရှုသံနောကျလိုကျတယျရုပျရှငျကဒါပဲတကားလုံ...
အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ - ၁